Aniga iyo Gacaladey ha Naloo Garnaqo
By Axmad Ismaaciil Maxamuud "Axmed Deeq"
Guurkayaga ka hor waxaannu ahayn dhig iyo udub, ul iyo diirkeed, ceeshow milix, haan iyo hadhuubkeed, iyo wax walba oo dad hilow, kalgacal iyo jacayl isu qabaa wadaagaan. Iyadu anigay ahayd, aniguna iyadaan ahaa! Haddase xaalkagayagu waa garan waa. Isma jeclin ismana necbin, isma dhegaysanno ismana maqalno, isma tix galinno iskumana tanaasulno, isma qadarinno ismana qiimaynno, isma dhawrnno ismana dhaqaalaynno, isma dhuganno iskumana dhololno, dhunkasho iyo isku dhegna hadalkeedaba daa. Arrinkayaga waxa lagu soo ururin karaa: "Kala go' kala lulashaa dhaanta." Layskuma kaaya qasbin ee intaannu is calmannay baannu haddana is calfannay. Waxayse sheeko dhabaqday markaannu isku hoy noqonnay.
Wax badan waxa dhegahayga ku soo dhici jiray "Naagaa rag is dhaafshay." Markaasaa intaan hoos isula faqay baan is idhi: malaha waxa kaa dhimaniba waa naag. Iyada lafteeda wax badan baa loogu sheekeeyay, looguna maahmaahay "Naagi god ha kaaga jirto ama gunti rageed." Markaasay godka waxay ka door bidday guntiga ragga.
Taasaa marka horeba malaha isku kaaya keentay
Ceel nin galay baa laga waraystaaye, kuwaan u tilmaan doontay waxay igula taliyeen inaanay naagtu jiljilayc iga dareemin, hadalka barin, la tashan iyo wax la hal maala. Anoo caadiya baan duulkaas goor baas la tashadee, waxaan ka soo noqday anoo garaaddo iyo gacan maroodi yeeshay. Iyana dhinaceeda kuwii ugu dhawaa waxay kula taliyeen: "Yaanu ninku kaa dareemin inaad jeceshahay, hadal naxariis lehna ha ku dhihin. Markuu wax kuu sheego ugu jawaab maxay dee iwm. Kolkaa iyana iyadoo caadiya bay qoladaas u tagtee waxay soo noqotay iyadoo gowso iyo geeso lo,aad yeelatay. Yartu tiiba ma'aha, anna haba sheegin!
Bilihii hore waxanu ku wada joognay xiise isku kaaya hayay, xishood iyo sarriigasho ay iyadu muujinaysay, ixtiraam iyo qadarin aannu u haynay dadka martida noo ahaa noona shaqaynayay, wax intaa dhaafsiisanse kumaanu wada joogin. Waxa laga yaabaa inaad tidhaa armay ku qadarinaysay oo aad kala masuugaysaa? Xaasha! Waayo markay dadkii naga tegeen baan arki lahaa haddii qadarin iyo ixtiraam meesha yaalo, anbase kuma dhaamee maxaan kula yaabayaa.
Ka hor intaannan is guursan waxay filaysay in guurku yahay deganaansho iyo raaxo, waxayse gashey dab iyo raran, anna waxaan eegayay kob calaf leh inaan degayo, waxaanse is arkay anoo kadabkay go,ay. Way dulman tahay, anna ka darri. Waannu wada dulmanahay. Yaa na dulmaya tolw? Cid kale loo saari maaye annaga uun baa isdulmaynna. oo sawtii dulmigu xaaraanta ahaa? kaayagani xaaraan ma'aha! Oo haddaa ma xalaal baa? xalaalna ma'aha, ee ka fursan waa baa kan la yidhaa!
Shaqo rasmiya ma hayo, haddana deeqdiisa Eebbe iima darna, oo gowskayga iyo gabadhaydaba waan ka adagahay. Haddii aan wax farsamaysan lahaa adduun awr gooyaa waa ii dhigmi lahaa. Waxase i waalay labada reer (qaadka iyo naagta) oo dhiigayga iyo dheecaankaygaba qaybsadey. Marar aan badnayn ooridaydu waxay isku mashquulisaa siday u ogaan lahayd dakhligayga, anna waxa i wareeriyay sidaan u ogaan lahaa da'deeda, hase yeeshee midkaayana guul kama gaadho.
Badiyaa shaqada waxaan ka imaaddaa anoo daallan, maalin maalinna cadhaysan. Xilliyada aan cadhaysnahay anoo buufta haya ayaan guriga soo galaa, dabadeedna anoon cidna la hadlin baa waxaan is bilqaa sariirtayda jiiq jiiqda badan. Mararka qaar waxaan maqlaa qof ku leh ooridayda hebel wuu cadhaysan yahay ee orod oo deji oo bal waxa ku dhacay weydii. Jawaabta ay bixiso ayaaba ka sii daran! Waxay tidhaahdaa waa qushigiisa, danihiisuu u cadhaysan yahay. Wallee inaanan halkaa u dhaafayn! Odhaahdan danbe dhinbiil igaga kulul, dacarna igaga qadhaadh. Markaasaan is idhaa ma taasaa naag kuu noqon.
Badiyaa guriga ma fadhiisto oo waxan u arkaa jeel naagtu leedahay. Markaan ka maqanahay uma soo xiiso. Waxa aan ka warqabaa in mar walba dacwad iga dhan ah meesha lagu diyaariyo, iyana mooyi inay maqnaanshahayga door biddo.
Maqaaxida qofka ugu danbeeya ee ka kaca ayaan ahay. Ma aqaano sababta laakiin rag baa iyagu fiidkaba yaaca. Tolow ma dumaradooda ayay ka baqaan, mise naago wanaagsan bay qabaan baan is kula showraa. Markaan ugu horreeyo waxaan hoydaa 12:00 habeenimo. Ooridayda oo cadhaysan baa irridda iga furta. Markaasay iigu hanjabtaa inaanay habeen danbe iga furayn, anna hadalkeeda waxba kama soo qaado, saa mirqaan baaban cirkaa marayaaye. Qof hurdo ka soo kacay bay iska dhigtaa, waxaanse dareensanahay inaanay hurdin ee ay i sugaysay. Wacnaan lahaydaa iyadoo iyadoo igu salaanta: Gacaliye waad iga raagtay. Caawa oo dhan baan ku sugayay ee maxaa ku helay", habboonaan lahaydaase inaan idhaa: Gacaliso waan kaa soo daahay ee raalli noqo intaan labada indhood dhexdooda ka dhunkado illayn waa xaaskaygiiye." Mase dhacdo. Oo tolow maxaa dhaqankaa noo diiday? Jawaabtu waa dhaqankaasi mid burinaya ballankii la nala galay bilawgii dhismaha gurigayaga ee ahaa inaanaan wax jacayl ah iyo naxariistoonba isu muujin.
Annagoo xaaladdaa ku jirna ayaa waxa soo kordhay uur. Gabadhi uma shaqayso, anna ma caawiyo, igamana sugayso oo arrinkaasi khusayeeba ma ihi! Oo tolow miyaan xilba i saarrayn? Aniga waxa i khuseeya inaan u imaaddo, raashin bisil oon bakeeri biyo lagu cabbaa ka dhinayn. Hadday dhici weydo iyadoo weliba ii soo wadda oo leh waan xanuunsanayay, ma sugee waxaan ka hor geeyaa hadallo deel qaaf ah oo damiirka damqaya, dadnimadana wax yeelaya sida: " Wallaahi waad kibirtay, iyo naa mana xanuunsanayside waad is yeel yeelaysaa", weliba hanjabaadna waan u sii raaciyaa. Markaasaa intay is ciil kaambido ayay hoos u oydaa, kuna calaacashaa: "nasiibkaygu xumaa ma kanuu Alle ii qoray." Anna dheg jalaq uma siiyo, mana damqado oo isma idhaa ka nax waa xaaskaagii oo xaamilo ahe, waayo naxariistaba waxaan u haystaa nacasnimo inay tahay. Sow yaab ma'aha!
Iyadoo uur leh lama socdo xaaladeeda caafimaad, maalinna uma raacin goobaha xanaanada hooyada uurka le, mana aha mid ii taalla, ee waxa keliya ee meesha ii yaallaa inay ilmo ii dhasho bes. Waan dareensanahay in ay cuntadii guriga ka go,day oo ay caatawday, is mase idhaa caawa hoteelka cunto yar oo dhadhan leh uga soo qaad, ama waa dumare macmacaan yar u sii gad. Iyana intay fududaydba isma odhan jirin xaajiga ka yaabi caawa oo casho yar oo heer sare ah iskugu celi. Xaajiyadda iyo canjeeradaba khaati baan ka is taagay oo way i daashadeen.
Dadkayaga ma jecla, waxanay ugu sii neceb tahay hooyaday. Marar badan waxaan ka maqlay "Islaantii ku dhashay baa maanta nala joogtay." Af adagaa adhaxda ka jabto! Bal maxaa u diiday in ay iska tidhaahdo" Hooyaa maanta joogtay." Aniguse kama ficil qaato oo hooyadeed waan ixtiraamaa, Taasa malaha lagu tilmaami karaa arrinka kaliya ee aan waddadda kaga wanaagsanahay ama ku dhaamo.
Uguma yeedho magaceeda sidii nimaan aqoon! Waxa aan yaryarka ku idhaa: "waar tii idin dhashay meeday", iyana sidoo kale.
Axmed Ismaaciil Maxamuud "Axmed Deeq"
Sheekooyinka kale ee uu qoraagu degelkan ku daabacay:
* Anniga iyo Naftayda Ha la noo Garnaqo! * Dhoof: Ma Wax Loo Dhigaa Jira?!
* Qaad: Maxaa Iga Raacay !!!
* Agoon Afar Waalid Leh _____________________________________________________________________ We welcome the submission of all articles for possible publication on WardheerNews.com So please email your article today Opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of WardheerNews Maqaalkani wuxuu ka turjumayaa aragtida Qoraaga loomana fasiran karo tan WardheerNews Copyright � 2010 WardheerNews.com